मेरो डायरी को पुर्ण रुप – मझेरी डट कम
करिब हप्ता दिन हाम्रो असमञ्जस्यता मा बित्यो । भेट नै भएन । भैहाले पनि बोलचाल भएन । म उनलाई चोखो प्रेम गर्थेँ उनका हरेक ईच्छा पुर्याउन सकुँ भन्ने मेरो अभिप्राय हुन्थ्यो । म उनिसँग प्रष्ट कुरा राख्न चाहान्थेँ तर उनले त्यो मौका नै दिईनन्।
आईतबार कलेज मा कुनै समुहले सँस्कृतिक कार्यक्रम गरेको थियो । मेरो पटक्कै मुड थिएन तै पनि साथिहरुले एउटा कबिता राख्न कर गरे । म मञ्च मा गएँ र दर्सक पट्टी गौर गरेँ । तर उनलाई कतै देखिन मैले बाचनको लागी भनेर अर्कै चेतनामुलक जनबादी कबिता तयार पारेको थिएँ तर अचानक मलाई दुईदिन अगाडी सरश्वती चोक मा बस पर्खिदा लेखेको कोरा कबिता याद आयो । फटाफट डायरी निकालेर आयोजक लाई नसोधी मैले त्यै कबिता बाचन गरेँ
(((((‘उ’ जस्ता लाग्ने उनिहरु
आए र गए,
यतिबेला त गन्तब्य पनि पुगे होलान्
तर म यथास्थान मा छु
केही बिते जस्तै गरेर हुईकिएका सबारी
बोल्ने फुर्सद नभएका मानीश हरु..
कसैलाई कसैको वास्ता छैन यहाँ
मैले झैँ ‘उ’ खोजेर कोही
समिपै उभिएको भए पनि
उस्ले मलाई चिन्दैन म उसलाई चिन्दिन
टाढा बाट हेर्दा
आईरहेको धमिलो प्रतिबिम्ब ‘उ’ जस्तै लाग्छ
नजिकिदै जाँदा कद मिल्दैन
कपाल अलि लामो वा छोटो हुन्छ
आखिर त्यो ‘उ’ हुदैन
घण्टौ भयो उभिएको मैले हार मानेको छैन
वरिपरीका मानीश मलाई हेरेर मुखामुख गर्न थालिसके
आशा पालेर मन मा
सँभाबनाका आँखा हरु बिछ्याई रहेछु
र शसँकित पनि छु
मैले भिडमा खोजेको अनुहार
कतै मेरो आँखै सामु त छैन ?)))
कबिता निकै लामो थियो तर बाचन गर्दै जाँदा भिडमा उनलाई देखेँ । उनि मलाई नै एक टक ले हेरी रहेकी थिईन । कबिता बाचन गर्ने मेरो केही सहास पनि उनलाई देख्ना साथ सिथिल भयो । त्यसैले अन्तीम अनुच्छेद लेखिएको थिएन तर मुखैले भनेर म स्टेज बाट बाहिरिएँ । मलाई अत्यन्तै असहज भएको जस्तो लाग्यो । म सरासरी कोठा आएँ ।
त्यतिबेला धनकुटामा एफएम स्टेसन थिएन । कान्तिपुर एफएम सुन्न त सकिन्थ्यो तर अलि हाम्रो पहुँच बाहिर को जस्तो लाग्थ्यो हामिलाई । गाउ गाउमा गुञ्जिने भनेको रेडियो नेपाल नै थियो ।
बिहानको खाना खाएँ र पल्टिएँ
रेडियो नेपालमा ‘श्रोता फोनिङ’ बजिरहेको थियो
कसैले नारायण गोपाल को
‘ मान्छेको मायाँ यहाँ खोलाको पानि जस्तै
किनारालाई छोई भाग्ने खहरेको बानी जस्तै …”
बोलको गित अनुरोध गर्यो
म त्यो गित सकिदा निकै भाबुक बनेछु , र आखा रसाएछन ।
ठिक त्यतिनै बेला ढोका मा कसैले ढक ढक गरिरहेको सुने
… उनि किँकर्तब्यबिमुढ ढोकामा उभिएकी थिईन म असमञ्जस्यता मा केही बेर अल्मलिएँ ।
ईन्दिरा…. आउ न भित्रै आउ ..
उनि बोलिनन् सरासर भित्र आईन र उभिईन
बस न भन्दै बेड देखाएर म अलि माथि सरेँ ।
एउटा कोठा थियो जहाँ चुलो त्यही थियो जुठेल्नो त्यही थियो ड्रेसिङ रुम देखी लाईब्रेरी सम्म मेरो त्यहीँ थियो । भनौ मैले त्यो कोठामा घर अटाएको थिएँ ।
मेरो कोठामा कुर्सी थिएन , एक्लो मान्छे सबै सरसामान आ आफ्नै ताल मा थिए । भर्खर खाना खाएको जुठो थाल र खोर्सानिको भेट्नो अनि एउटा अमलाको अचारको गेडो तिर उनको नजर परे झै लाग्यो कपडा पनि असरल्ल छरिएका थिए । कोर्स बाहिरका उपन्यास खाटमा चाङ थिए । मलाइ सारै असहज लाग्यो ।
उनि बोलेकी छैनन् । आखा घुमाउदै उनको नजर टेबुल को चुरोट को डब्बा मा पर्यो ।
” मेरो हैन दिबस को हो ” मैले हतार हतार भनेको सुनेर
उनि फिस्स हाँसीन ।
‘तपाईलाई ढाट्न पनि आउदो रहेनछ’
” ढाट्ने अभ्यास छैन नि त”
उनि फेरी हासिन मात्र ।
उनी म सँग माफ माग्न आएकि रे खुलेर माफ मागिन –
“मैले तपाईलाई एक प्रेमी मात्र हैन त्यो भन्दा बढि सोच्न थालेकि रहिछु । र तपाईमाथि मेरो अधिकार छ जस्तो सोच्न थालेकी रहिछु । त्यसैले तपाई लाई घुर्क्याउनु मा मलाई आनन्द आउन थालेको थियो । मेरा हरेक आवस्यकता को तपाई सहज परिपुर्ती गरिदिनु हुन्थ्यो । कल्हिल्यै मेरो अनुरोध ईन्कार गर्नु भएन त्यसैले मैले जे भने पनि तपाईले पुरा गरिदिनु हुन्छ भन्ने ओभर कन्फिडेन्ट ले हाम्रो सँबन्ध मा फाटो ल्यायो……. । ”
त्यस्तै त्यस्तै औपचारीक शब्द हरु ..
”ढिलै भए पनि तिमिलाई तिम्रो गल्ति महशुस भएछ । खुसि लाग्यो । तर थाहा छ तिमिलाई- यि बिचका दिन मैले कसरी गुजारेँ भनेर ? भिलेर पनि यस्तो मजाक नगर म सँग । ”
आखिर फेरी एक भयौ ।
उनी एक्लै बस्थिन म पनि एक्लै । हामि सँगै बसौ भनेर उनले नै प्रस्ताब गरिन
अहिले बसिरहेको घरमा त सब लाई थाहा थियो म अबिबाहीत भनेर हामीले माथ्लो कोप्चे मा नयाँ कोठा खोज्यौ । र हामी सँगै बस्न थाल्यौ ।
कलेज जाने एउटै समय भएको ले प्राय बाथरुम को लागी एकजना पर्खिनु पर्ने बाध्यता थियो । उनी गईन भने म चिया पकाउथेँ । म गएँ भने उनी चिया बनाउथिन । हामी मा एकाएक असाध्यै समाझदारीता बढेको थियो तर सहनसिलता चाही अलि कम थियो ।सानो सानो कुरा ले उनि रिसाउथिन र म झपार्थेँ । केहि घण्टा बोलचाल बन्द हुन्थ्यो ।
उनि बेलुकी पढाईलाई निकै प्रथमिकता दिन्थिन । तर दिउसो कलेज बाट फर्के पछि खाना खाएर उनि सँधै बाहिर निस्किन्थिन । मलाई साथिको पार्लर मा ट्रेनिङ गर्न जान्छु भन्थिन ।
सँगै कलेज जान्थ्यौ फर्किदा म सँधै पहिला नै आउथेँ । म उनलाइ पर्खिन उचित ठान्दैनथेँ किन कि रुम आएर खाना बनाउनु पर्थ्यो ।
हामी सँगै बस्न थाले पछि त्यती मायाँ पिरतीका कुरा गर्दैनथ्यौ । दाल चामल नुन बेसार आदी को जोहो र पढाई ले गर्दा हामी आपसमा अलि फरक ब्यबहार देखाउन थालेका थियौ । सबै काम हतार हतार मा भ्याएर फुत्त डेटिङमा गएजस्तो सजिलो भएन सँगै बसेपछी । हरेक चिज को महत्व अभाब मा मात्र खड्किने ध्रुबसत्य बाट हामि अछुतो रहेनौँ । आपसमा झगडा नहोस भनेर हामी झुटको सहारा लिन्थ्यौ । साँचो बोल्दा के? किन? कसरी? जस्तो स्पस्टीकरण दिनुपर्ने भय ले म पनि कयौ पटक झुट बोल्न थालेको थिएँ ।
तर जब झुटको पर्दाफास हुन्थ्यो हामि बिच ठुलै झगडा हुन्थ्यो ।
उनि यो डाईलग बार बार दोर्याउथिन “तिमी पहिलेको तोया रहेनौ ” म पनि
मेरो रेडिमेड जबाफ फर्काउथेँ ‘ तिमि पनि त्यो ईन्दिरा रहिनौ जस्लाई म
मलाई भन्दा बढि मायाँ गर्थेँ । ”
दरार हरु क्रमस बढ्दै गए आपसमा तिक्तता कम हुनुको साटो झन गुणात्मक बृद्धी भै रहेको थियो ।
धेरै साथी हरु ले प्रेम बिहे गरेका थिए । तर प्राय सबैको असफल जस्तै देख्दथेँ म । बिबाह पुर्ब अगाध मायाँ गर्ने हरु बिबाह पश्चात एकाएक ३६ को आँकडा देखाएको मेरै आँखाले देखेको थिएँ । बास्तब्मा जुनि काट्नु र प्रेम गर्नु अली फरक कुरा नै रहेछन । एउटै छत मुनि बसेर सँधै प्रेमलाप गर्न सकिदो रहेनछ ।
यो लिभिङ टुगेदर ले मलाई अर्को शिक्षा पनि दिएको थियो त्यो हो
..There should have common interests and feeling between the partners. There isaroom for compromise to each other. But it has its limitation too. You can’t surrender everything,giving up your own interests and feeling for pleasing your life partners every single time–that doesn’t work ….
जिबन साथी बनाउन धेरै इच्छा आकाँक्षा हरु चाही मिल्दा जुल्दा हुनुपर्दो रहेछ । केहि रहर हरु मात्र सँझौता गर्न सकिदो रहेछ । तर सबै ईच्छा आकाँक्षा हरु मा सँझौता गरेर जिबनको रथ अगाडी बढाउन सकिदो रहेनछ । र सँधै भरी सबै ठाउमा त्याग गर्न कदापि सकिदो रहेनछ ।
हामी आपसमा बोझ बन्न थालेका थियौ साना साना कुराले बिबाद चुलिन्थ्यो ।
एक दिन सुक्रबार को दिन थियो बिहान कलेज जाँदा म पहिले गएको थिएँ ढोकाको चाबी कोठाभित्रै छुटेछ । बिहानको खाना बनाउने काम सँधै मेरै थियो उनि बेलुका बनाउथिन कलेज बाट फर्किदा मात्रै मैले चाबि भित्र छेडिएको थाहा पाएँ । उनलाई फोन गरेको रिसीभ भएन साईलेन्स थियो होला । म पर्खिएर बसेँ । उनि १ बजे तिर भोक ले लखतरान भएर आईन म पनि भोक ले ओठ मुख सुकाएर बसि रहेको थिएँ । म ढोका नखोली बसेको देखे पछि उनि रिसले आगो भईन । कोठा भित्र गए पछि बिबाद सुरु भयो । एक.. दुई… तिन…. हुदै यसले बिकराल झगडाको रुप लियो । ईतिहास केलाएर भएका स साना गल्ति हरु उजागर गरिए । आपसमा दोशारोपण गरिए ।
करिब एक घण्टा भोको पेट मा कलेज ड्रेस नै नखोली बादबिबाद गरे पछि म बाहिर निस्केर सरासर होटल गएँ र खाना खाएँ अनि होटल नजिकैको साथि बिराज को डेरा तिर गएँ ।म सारै अपसेट भएको थिएँ । डिप्लोमा पहिलो बर्ष को रिजल्ट त्यहि दिन आएको थियो । बिराज पनि फेल भएको ले त्यस्तै चिन्तामा रहेछ ।
दुबै ले प्लान बनायौ
जिल्ला अस्पताल अगाडी एउटा सानो नयाँ होटल खुलेको थियो ।
सेट र बियर सँगै बिराज र म धेरै बेर बस्यौ । सबै दुख सुख र हामी बिच का असहजता हरु सेयर गर्दै बस्यौ । रात निकै हुदा कोठा पुगियो । ढोका ढक्ढक्याएँ ढोका खुल्यो बिजुली रहेनछ । सादा मोबाईलको स्कृन को उज्यालो ले ब्रस मा पेस्ट लगाएँ र बाथरुम छिरेँ । मलाई कुनै बहस गर्न मन लागेन किन कि म आबेस मा आउन सक्थेँ र अप्रिय घटना घट्न सक्थ्यो । बिहान उठेर कुरा गर्छु भन्ने सोचेर म चुपचाप सुतेँ । सनिबार उसै पनि कलेज जानु नपर्ने दिन फेरी बेलुकिको ह्याङ ओभर ले अबेर मात्र निन्द्रा खुल्यो । उठेर यसो हेरेको म त हेरेको हेर्यै भएँ । कोठामा पुरै सन्नाटा थियो । उनको सामान कोठामा केही थिएन । उनको भन्नु केही काम नलाग्ने पुराना कपडा तथा फुटेका चुराका टुक्रा हरु मात्र देखिदैथे । ढोकामा टाँसिएको दुईजनाको तस्बिर मध्य उनको तस्बिर थिएन । जहाँ मार्कर ले लेखिएको थियो ”हाम्रो सँबन्ध आज देखी सकियो” । मलाई सपना हो कि बिपना छुट्यान मुस्किल परिरहेको थियो ।
त्यो आखीर तितो सत्य थियो उनी मलाई छोडेर गई सकेकी थिईन ।
सहास बटुलेर उठेँ टाउको दुखेर हलचल गर्न नहुने भएको रहेछ । मेरा सामान हरु सबै छरपष्ट थिए ।
बिस्तारै सामान मिलाउन थालेँ
उसका काम नलाग्ने चिज सफा गर्दै डस्टबिन मा हाल्न थालेँ । खाट मुनि रहेको चुडिएको चप्पल ले मलाई त्यो सिढी याद दिलायो । जहाँ हाम्रो पहिलो भेट भएको थियो । म पुरै flashback मा फर्किएँ र भुईमा थचक्क बसेँ
चुडिएको चप्पल बाट सुरु भएको कहानी चुडिएकै चप्पल बाट अन्त भयो
2 thoughts on “मेरो डायरी को पुर्ण रुप”
indragelal June 11, 2015 at 11:42 am
एउटा अत्यन्त राम्रो र जीवन्त लेख
तोयानाथ पौडेल October 24, 2015 at 1:17 am
आभारी रहेँ सर पढेर प्रतीकृया दिनु भएको मा !!